Wasiirka Macdanta Oo furay shir lagu shaacinayo dhaqan-gelinta xeerka Biyaha | Somaliland.Org
Wasiirka Macdanta Oo furay shir lagu shaacinayo dhaqan-gelinta xeerka Biyaha
December 19, 2012	Hargeysa (Somaliland.Org)- Wasiirka Macdanta Iyo Biyaha Somaliland Md.Xuseen Cabdi Ducaale, ayaa maanta Huteelka Ambassador ee Magaaladda Hargeysa ka furay shir lagu shaacinayay dhaqan-gelka xeerka biyaha oo uu dhawaan dhaqan-gelinkiisa saxeexay madaxweyne Axmed Siilaanyo.
Shirkan waxa ka soo qeyb galay waaxaha kala duwan Wasaarada, Ha’yadaha caalamiga ah ee ka shaqeeya Biyaha, maamulka wakaaladaha biyaha ee magaalooyinka dalka iyo xubno ka socday Goleyaasha Baarlamaanka.
Shirkan ayaa ujeedadiisu ahayd sidii Haay’adaha caalamiga ah loogu soo bandhigi lahaa qodobadda xeerka biyaha si ay ugu camal falaan.
Wasiirka Macdanta iyo Biyaha Eng. Xuseen Cabdi Ducaale ayaa sharaxaad ka bixiyay qodobadda xeerkan iyo muhiimadda uu ugu fadhiyo wasaaradaasi waxaanu yidhi “Xeerkani wuxuu qeexayaa ujeedooyinka guud iyo kuwa gaarka ah ee dawlada Somaliland ka leedahay horumaarinta, habsi u adeegsiga iyo ilaalinta khayraadka Biyaha. Maanta waxaynu halkan doonaynaa inaynu ku dhaqan galino laba arrimood ama aynu ku shaacino.”
Wasiirku waxa uu tilmaamay in xeerka biyaha ee la sameeyay uu qaranka ugu fadhiyo ahmiyad weyn, waxaanu yidhi “Arrinta ugu horaysa waxa weeye in aynu shaaca ka qadayno maanta sharcigii ama xeerkii Biyaha ee dalka Somaliland. sidoo kale xeerkani wuxuu fasirayaa biyo siinta magaalooyinka iyo miyiga iyo qaabka sharci ahaan loogu igmanaayo wajibaadka laga rabo oo ah sidii loogu samayn lahaa xeerka Biyaha oo maanta aynu ku guulaysanay inaanu samayno xeer lagu maamulaayo Biyaha Somaliland oo dhan, taas waxaan odhan karaa waa guusha aynu gaadhnay.”
waxa muddo badan laga shaqeenaayey sidii aynu xeerka Biyaha u samaysan lahayn oo ah xeer hagaaya Biyaha. Markaa waxa maanta farxad wayn ii ah inaynu maanta soo gaadhnay marxaladaas faa’iidada inoo ah inaynu haysano xeer biyaha aynu ku maamulno. Dalkeenu hore umuu lahayn xeerka Biyaha, taas oo xeerkani soo maray hawl aad u weyn,”ayuu yidhi Md. Xuseen Cabdi Ducaale.
Wasiirku waxa uu Madaxweyne Siilaanyo ku ammaanay dhaqan-gelinta xeerka biyaha oo ay baahi u qabeen, waxaanu yidhi “Madaxwaynaha aad ayaan ugu mahadnaqayaa inuu saxeexay xeerkan iyo Baarlamaankeena oo ah kuwa sharciga inoo sameeyay iyo cid kasta oo ka qayb qaadatay xeerkan oo waxa uu inoo leeyahay faa’iidooyin badan.”
“Biyaha waynu ognahay dalkeena waa dal aad u Biyo yarooda, markaa haddaynaan qaynuun kala haga maamulka Biyaha aynaan haysan dee waxa weeye mamul-xumo ayaa inagaga dhacaysa. Lakiin maanta nasiib wannaag xeerkii ayaa inoo soo baxay oo inoo suurta galinaaya Biyaha maamulkooda, dhawristooda iyo is ticmaalkooda iyo wixii lagu hagaayey ayaynu maanta haysanaa,”ayuu yidhi Wasiirka Macdantu.
Wasiirku waxa uu intaasi ku ladhay “Xeerkan waxaana u arkaa inay tahay guulaha uu gaadhay qarankan. Waxaana filayaa inuu wax wayn ka taraayo Biyaha Somaliland oo ah arrin loo bahan yahay.”
Xeerka Biyaha Somaliland XEER NO:49 waxa uu ka kooban yahay 16 cutub oo ay ku jiraan 83 Qodob.
Previous PostGudoomiyihii Hore ee Baanka Somaliland Oo Ku Geeriyooday HargeysaNext PostMadaxweyne Siilaanyo Oo Shacbiga Ka Tacsiyadeeyay Geerida Marxuum- C/Raxmaan Ducaale	Blog